An-kitsim-po : tsy misy mahavita tena | NewsMada
An-kitsim-po : tsy misy mahavita tena
Hanova zavatra betsaka eo amin’ny toekarena eran-tany ny fialan-dry zareo Anglisy ao anatin’ny Vondrona eoropeanina. Vao nivoaka iny valin’ny fitsapan-kevi-bahoaka iny, avy hatrany aloha, nidina ny sandan’ny vola anglisy Livre Sterling. Betsaka ireo orinasa sy banky eoropeanina, nilaza fa hisintaka, hiala ihany koa any Grande Bretagne. Tsy vitsy mihitsy aza ireo mpandraharaha eoropeanina somary velon-tsiky taorian’ny valin’ny fitsapan-kevi-bahoaka.
Ireo tsy nankato an’iny any an-toerana, nanangona sonia indray, nitaky ny hameranana ny fitsapan-kevi-bahoaka, nitsipaka tanteraka iny politika te “hahaleotena tanteraka” iny. Tanora ny betsaka amin’izy ireo, mijery ny ho aviny.
Na ahoana na ahoana, tsy misy firenena mahavita tena tanteraka eo amin’ny lafiny toekarena amin’izao taonjato izao. Misy antony daholo ireny fikambanana iraisam-pirenena maro sy isaky ny kaontinanta ireny. Ary mikendry ny tombontsoa ara-toekarena iombonana ny antony nananganana azy ireny. Rtoa Angela Merkel, chancelière Alemà, efa nametra-panontaniana mazava, inona marina ary no tadiavin’ny Anglisy momba ny fifandraisana amin’ny Eoropa ?